2. မိုးရာသီလျှော့ဈေးများ - Asia Uniway
3.5ရာခိုင်နှုန်း Discount - Aroma
2. သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
3. သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
1. နိုင်ငံပေါင်း (136) နိုင်ငံကို ကြိုတင်ရောင်းချလိုက်တဲ့ ကိုရီးယားအက်ရှင်ဇာတ်ကား
2. (5) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကို အယ်လ်ဘမ်အသစ်နဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကနေတဆင့်ကျင်းပမယ့် VlXX
3. (LEAD) Seoul မြို့၊ Gangnam မှာရှိတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးစင်တာမှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Lee Min-ho
1. ပယ်မယား တစ်ယောက်သောကား - အစ/အဆုံး
2. ဂျာနယ်စလစ် - Chapter 1
3. ချိုင်းထောက် - Chapter 1
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၁၉၆၈ ဇန်န၀ါရီ (၉)ရက်။ အင်္ဂါနေ့တွင် ရေနံချောင်းမြို့ သူဌေးကုန်း ရပ်ကွက်၌ ခမည်းတော် ဦးစိန်ဝင်း။ မယ်တော် ဒေါ်သိန်းသိန်းတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကို ရေနံချောင်းမြို့။ အထက(၁)မှ ခြောက်ဘာသာ (ဘာသာစုံ) ဂုဏ်ထူးဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဒုတိယ ရလျှက် အောင်မြင်သည်။ သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွှန်အဖြစ် ၈တန်း။ ၉တန်း။ ၁၀တန်း တို့၌ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ် ဆယ်တန်း အောင်မြင်ပြီးနောက် သာဿနာ့ ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်တွင် ပရိယတ္တိ စာပေများ လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပထမကျော်ဘွဲ့ နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဓမ္မာစရိယဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အသက် ၃၀ ပြည့် ပုလဲရတုမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် တစ်ယောက်တည်းနေ တစ်စိတ်တည်းထား စာအုပ်ကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယခုအခါ သထုံမြို့ ကေလာသတောင်။ ရွှေပါရမီ တောရကျောင်း၌ တစ်ပါးတည်း ဧကစာရီတောရ ဆောက်တည်လျှက် ပရိယတ်။ ပဋိပတ်အလုပ် အားထုတ်လျှက်ရှိသည်။
Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
၂၂/၁၀/၂၀၀၅ အပိုင်း (၂)
စာရေးသူ: အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ)
◄ လိုတရ ပင်မစာမျက်နှာ ဗုဒ္ဓ တရားတော်များ ပင်မစာမျက်နှာ ►